माघ महिनाको राशिफल : चम्किँदैछ यी राशिको भाग्य - Nepal Post Daily
माघ महिनाको राशिफल : चम्किँदैछ यी राशिको भाग्य
यो महिना केहि समयको लागि जारी कुनै दुविधा र असुविधाबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ । आध्यात्मिक र धार्मिक गतिविधिहरूमा केही समय खर्च गर्नाले तपाईंलाई सकारात्मक बनाउँछ । कुनै पनि महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसैले कुनै पनि फोन कल बेवास्ता नगर्नुहोस् । स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुहोला । ईर्ष्या गर्नेहरुले फसाउन सक्छन् । अस्वस्थताका बीच कामको बोझ बढ्नेछ ।
माघ महिना कुनै पनि अज्ञात व्यक्तिसँग तपाईंको व्यक्तिगत योजनाहरू साझा नगर्नुहोस् । कुनै पनि अवैध काममा रुचि नराख्नुहोस् । यसको कारण तपाईं केही कठिनाइमा पर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको लापरवाहीको कारण केही महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू पनि हराउन सक्छन् । दीर्घकालीन काममा लगानी गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। आँटले जटिल कामसमेत सम्पादन हुन सक्छ। आस मारेको काम बन्नाले उत्साह बढ्नेछ ।
यो महिना हालको अवस्थामा तपाईको अनुभवका कारण तपाईले धेरै कुरा सिक्दैहुनुहुन्छ, जसको कारणले तपाई गाह्रो चीजलाई पछाडि छोड्दै अगाडि बढ्ने कोशिश गरिरहनुहुनेछ । आफूलाई सकारात्मक राख्न अझ बढी प्रयास गर्नुपर्नेछ । परिवारसँग सम्बन्धित समस्याहरू कम हुनेछ र स्थिरता प्राप्त हुनेछ । व्यावहारिक झमेला आइलाग्न सक्छन् । तर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ ।
यो महिना व्यापारमा कुनै पनि सम्झौता प्राप्त गर्नुअघि निश्चित रूपले त्यो कार्यको बारेमा पूर्ण जान्न निश्चित हुनुहोस् । हतारमा कुनै काम नगर्नुहोस् । कार्यालयमा काम घरमै भइरहेको कारण त्यहाँ धेरै समस्याहरू हुनेछन् । तर्क शक्ति बढे पनि कुराकानी गर्दा गोपनीयतामा ध्यान दिनुहोला। प्रियजनसँग भेटघाट र प्रसन्नताको समय छ। विभिन्न उपहार समेत पाइएला । आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन् । विवादले मन खिन्न तुल्याउन सक्छ ।
यो महिना कुनै पनि काम उथलपुथल तालिकाबाट मुक्त हुनेछ । महत्त्वपूर्ण वित्त सम्बन्धित योजनाहरूमा लिने निर्णयहरूले सकारात्मक परिणाम दिनेछ। बेरोजगार युवाहरूको लागि केहि राम्रा कामहरु आउँछन् । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । धार्मिक तथा परोपकार जन्य क्रियाकलापमा संलग्नता बढ्नेछ । पढाइमा राम्रै प्रगति हुनेछ।
कामको उपलब्धि देखाएर थप फाइदा उठाउन सकिनेछ । प्रशंसकहरु बढ्नेछन् । मध्यस्थताका लागि अनुभवी व्यक्तिलाई समावेश गर्नु राम्रो रहन्छ । रिस र क्रोधको सट्टा शान्त तरिकामा समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुहोस् । पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। कर्मयोगमा अभिवृद्धि हुनेछ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइनेछ । भ्रमणका बीच मानसम्मान पनि प्राप्त हुने समय छ ।
विवाहित सम्बन्धमा मिठास कायम गर्न पारस्परिक सहयोग र सद्भाव कायम गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने आपसी मतभेदले पनि घरको व्यवस्थामा असर गर्न सक्छ । द्रव्यप्राप्तिको संकेत मिलेको छ । काममा सहयोग प्राप्त होला । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । सुखद समाचार सुन्न पाइनेछ। पार्टी, पिकनिक वा खानपान समारोहमा सहभागी भइएला ।
सुरुवातमा व्यापारमा गतिविधिहरु सामान्य हुनेछ । केहि अर्डरहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ । तपाईको सुपरिवेक्षण अन्तर्गत सबै कामहरू समापन गर्ने प्रयास गर्नुहोस् । कर्मचारीको नकारात्मक मनोवृत्तिले तपाईंलाई असर पार्न सक्छ । प्रशंसकहरु बढ्नेछन् । सहयोगीहरुले काममा साथ दिनेछन् । राम्रै फाइदाको योग छ । विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ । प्रतिस्पर्धा वा मुद्दा–मामिलामा विजयी भइनेछ ।
महत्त्वपूर्ण वित्त सम्बन्धित योजनाहरूमा लिने निर्णयहरूले सकारात्मक परिणाम दिनेछ । काम बिग्रिनाले मनमा अशान्ति पैदा होला । खानपानको असावधानीले स्वास्थ्य कमजोर बन्ने देखिन्छ । पढाइ लेखाइमा समय दिन नसकिएला । व्यावसायिक काममा पनि त्यत्ति फाइदा नहोला । आत्म–विश्वास बढ्नेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुनेछ। राम्रै फाइदाको योग छ । आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन्।
कार्यस्थलमा तपाईको बारेमा त्यहाँ केही गलत धारणा हुन सक्छन् । यसलाई पार गर्न तपाईंले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन देखाउनुपर्नेछ। स्वास्थ्य: एसिडिटीका कारण असुविधा रहनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व हातलागी हुनेछ । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिको उपयोगबाट प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ । व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ । विशेष सभा–समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ ।
शुरुवातमा, तपाईं योजना अनुसार काम गर्न कोशिस गर्नुहुन्छ, तर दिमागको फुर्तिलापका कारण तपाईं योजनामा अडिग र कुनै एक चीजमा स्थिर रहनको लागी गाह्रो हुनसक्छ । एउटा चीज पूर्ण गर्ने निर्णय गरेर त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् । तपाईंको कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ, सचेत रहनुहोला । बोलीको गलत अर्थ लाग्ने र लेनदेनमा विवाद बढ्ने सम्भावना छ ।
परिवारमा आपसी प्रेम र सद्भावको वातावरण हुनेछ । बेकारको प्रेम मामिला र साथीहरूसँग समय बर्बाद नगर्नुहोस् । स्वास्थ्य ठीक हुनेछ । तर तपाईको प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत राख्न, आयुर्वेदिक चीजहरूको खपत राख्नुहोस् । सफलताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय छ । शत्रुहरूको चलखेल बढ्नाले केही चुनौती समेत सामना गर्नुपर्ला । प्रयत्न गर्दा मौकाको फाइदा लिन सकिनेछ ।
Previous articleकस्तो रहला आजको मौसम ?
Next articleकोरोनाविरुद्ध बुस्टर डाेज चाहियाे ? भोलिदेखि लगाउन पाइने